“Maalin maalmaha ka mid ah waxaan ka ciyaari doonaa horyaalka Serie A” – Luka Modrić – Gool FM
(Madrid) 13 Nof 2019. Xiddiga kooxda Real Madrid ee Luka Modrić ayaa sheegay inuu maalin uun laga yaabo inuu ka ciyaaro horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Luka Modrić ayaa dhinaca kale shegay inuu aad u jecelyahay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
34 sano jirka Luka Mordic ayaa lala xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo horyaalka Serie A xagaagii hore, gaar ahaan kooxaha AC Milan ama Inter Milan, laakiin ugu dambeyntii wuxuu iska sii joogay safka Real Madrid xilli ciyaareedkan.
Haddaba wareysi uu ku bixiyay Luka Modrić shabakada “Sky Sports” ee fadhigeedu yahay dalka Talyaaniga ayaa waxay xaqiijineysaa in fikrada uu xiddiga reer Croatia ugu dhaqaaqayo horyaalka Talyaaniga ay weli miiska saaran tahay.
Luka Modrić ayaa ka jawaab celiyay kaddib markii la weydiiyay su’aal ku aadaneyd suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo horyaalka Serie A, wuxuuna yiri:
“Waan jeclahay Talyaaniga, waxay aad ugu egtahay Croatia, sidoo kale waxaan daawadaa horyaalka Serie A, sababtoo ah waxaa ku sugan qaar badan ee saaxiibadeyda xulka qaranka ah oo halkaas ka ciyaara”.
“Dadka reer Talyaani waxay leeyihiin maskax la mid ah teena oo kale, taasna aniga wax weyn ayey ii tahay”.
“Waan arki doonaa waxa dhaca, waxaa laga yaabaa inaan maalin uun ka ciyaaro horyaalka Serie A, laakiin kama hadli karo taas sababtoo ah waxaan halkan u joogaa inaan ahay xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid”.
“Waxaan jeclahay inaan joogo Real Madrid, ilaa iyo hada waxaan mustaqbalkeyga ku arkaa halkaan oo kaliya”.